Arịrịọ maka onyinye | Ota Ward Cultural Promotion Association
- Nkwado sitere na onye obula ga akwado omenaala omenaala Ota Ward ma mee ka e kee obodo omenaala mara mma-
Ota Ward Cultural Promotion Association na etinye aka na oru di iche iche iji nye aka na nwughari nke Ota Ward na okike obodo mara mma site na omenaala.
Anyị ga-eji onyinye anyị na-enweta mee ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee ike ịmepụta ohere ịbanye na omenaala na nka.
Ya mere, anyị na-arịọ gị nkwado na nkwado maka ebumnuche nke ọrụ anyị.
Toshiaki Uejo, Onye isi oche, Ota Ward Cultural Promotion Association
Zọ inye onyinye
Nke mbụ, biko kpọtụrụ anyị.Anyị ga-agwa gị gbasara usoro a.
Ulo oru a na acho nkwado
Ugbu a, anyị na-achọ nkwado na ọrụ ndị a.
Omelọ ihe nkiri nke Magome Bunshimura 2021
Applicationdị ngwa onyinye
Banyere ihe mgbakwunye ụtụ maka onyinye
Inye onyinye na mkpakọrịta anyị tozuru etozu maka ụtụ isi.Achọrọ ịkwụghachi ụtụ isi ikpeazụ iji nweta ọgwụgwọ kacha mma.Na mgbakwunye, mgbe ị na-ede akwụkwọ nloghachi ụtụ isi ikpeazụ, achọrọ "Asambodo nnata nke onyinye" nke Association a nyere.
Nwere ike ịhọrọ ịnata onyinye onyinye dị ka mwepu ego ma ọ bụ mwepu onyinye pụrụ iche dị ka kredit ụtụ, nke ọ bụla bara uru.Maka nkọwapụta, biko rụtụ aka na weebụsaịtị NTA.
Nwere ike tozuo maka ụtụ obibi nke onwe gị na iwepụ ego ụtụ.A na-ejikwa ụtụ obibi nke onwe dị iche iche dabere na ngalaba, obodo, obodo, na obodo, yabụ biko jụọ ngalaba, obodo, obodo, ma ọ bụ obodo gị maka nkọwa.
Ebe obibi National Tax Agency
Nwere ike iwepu ego na mwepu ya iche na onyinye izugbe.Maka nkọwapụta, biko rụtụ aka na weebụsaịtị NTA.